Cuntada protein-ka: waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo waxa laga filan karo | Ragga Stylish
Miyaad tixgelinaysaa inaad raacdo cuntada borotiinka ah? Kadib waxaad timid meeshii saxda ahayd, maxaa yeelay halkan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato qorshayaashan cunista.
Maxay tahay, maxaa loogu talagalay, cuntooyinka la oggol yahay iyo kuwa aan la oggoleyn iyo maxay yihiin cilladaha. Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno su'aalahan hoose si aan kaaga caawino inaad go'aan ka gaarto.
1 Waa maxay cuntada borotiinka?
1.1 Sida loo helo borotiin badan
2 Cunnooyinka borotiinka iyo natiijooyinka jirkaaga
3 Xaggee bay ka yimaadaan borotiinnada?
3.1 Ha dayicin fiberka
Waa maxay cuntada borotiinka?
Waxaad u badan tahay inaad maqashay cuntooyinka sida Atkins ama Cuntada Aaga. Hagaag, labaduba waa tusaale cuntooyinka borotiinka. Sida magaca ka muuqata, borotiinnada ayaa doorka ugu weyn ka ciyaara. Ujeeddadeeda, dad badani waxay u qaataan sababtoo ah waxay rabaan inay miisaanka iska ridaan.
Barootiinnada ayaa muhiim u ah cuntada. Xitaa haddii aan rabno, kama maarmin iyaga la'aantood sababo badan awgood. Waa xaqiiqo. Ragga waxay u baahan yihiin ugu yaraan 60 garaam oo borotiin ah maalintii (in ka badan haddii aad jimicsi sameyso), laakiin cunnooyinka borotiinku way sii socdaan, kugu martiqaadaya inaad aad uga badato qadarka maalinlaha ah ee lagugula talinayo ee borotiinka.
Waxaad ka heli kartaa borotiin dheeri ah hilibka, laakiin kaliya ha diiradda saarin, halkii Way ku habboon tahay in loo qaybiyo shaqada bixinta borotiinka dhowr kooxood oo cunno ah. Iyo, sidaad ogtahay, digirta, lowska, miraha, ukunta, jiiska iyo cuntada badda sidoo kale waxay ku siin karaan nafaqadan.
Sida loo helo borotiin badan
Fiiri maqaalka: Cunnooyinka borotiinka leh. Halkaas waxaad ka heli doontaa fursado badan oo cunto ah oo kaa caawin doona inaad kordhiso borotiinka ku jira cuntadaada, xoolaha iyo khudradda labadaba.
Cunnooyinka borotiinka iyo natiijooyinka jirkaaga
Caadi ahaan, nooca cunnada ee aan la macaamilno waqtigan waxay keenaysaa hoos u dhigista cuntooyinka aan borotiinka lahayn, maadaama aysan boos u bannaanayn qof walba. Sidan oo kale, haddii ay kuu qorsheeyaan cunto borotiin ah, waa suurtagal in aad cuni karto kaarbohaydraytyo, miro iyo khudrad ka yar tan hadda. Waana halka ay fure u tahay, maadaama goynta karbohaydraytyadu ay jidhka ka caawiyaan inuu isticmaalo dufanka u urursan shidaalka. Tani waxay keentaa miisaanka oo yaraada iyo murqaha oo kordha marka lagu daro jimicsiga.
Taasina waxay khubaradu ka digayaan in cunista borotiin badan aysan ku filneyn inuu helo murqo. Sidoo kale waa inaad cuntaa cunto isku dheeli tiran, oo miraha iyo khudradda ka maqan yihiin, iyo sidoo kale inaad jimicsi joogto ah sameyso, gaar ahaan tababarka xoogga.
Ugu dambeyntii natiijooyinka ugu muuqda ee muuqda, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto hilibka caatada ah, kuwaas oo bixiya isla borotiinada iyagoo ku badalaya dufan yar. Xaqiiqdii, gram gram, hilibka cas ee caatada ah wuxuu leeyahay waxyar oo dufan badan marka loo eego hilibka cad ee aan maqaarka lahayn, laakiin aad ayuu uga yaryahay marka loo barbar dhigo hilibka dufanka badan Markaad wax u iibsanaysid caanaha, raadi noocyo dufan yar ama aan dufan lahayn si ay kaaga caawiso inaad kalooriyada ilaaliso.
Xaggee bay ka yimaadaan borotiinnada?
Badanaa hilibkaSidaas darteed haddii aad tahay khudradeed, vegan, ama aad kaliya isku dayayso inaad cunto cunnada ugu yar ee xoolaha sida ugu macquulsan, waxaa macquul ah inaad ka fiirsato istiraatiijiyad kale oo lagu gaaro himilooyinka jirkaaga. Waxaa jira qorshayaal kale oo badan oo kaa caawin kara kuwaas oo aan ku jirin hilibka, ama ugu yaraan aan ku jirin tiro aad u tiro badan sida cuntada ku jirta munaasabaddan.
Hilibka cad wuxuu leeyahay dufan kayar hilibka cas, sidaad horeyba u ogayd, laakiin markii digaag ama turkey ay kujiraan liiska cuntadaada borotiinka, ka saar maqaarka. Khabiiradaada nafaqada leh ayaa runtii kugula talin doonta maadaama qaybtaan ay kakooban tahay baruur cufan iyo, cunto kasta oo borotiin ah inay wax ku ool noqoto, waxaa jira shuruud muhiim ah: yareynta jiritaanka baruurta.
Waad ku dari kartaa hilib cad iyo hilib cas. In kasta oo ay jirto u janjeera in laga fikiro in hilibka guduudan uu xun yahay, runtiina waxay kuxirantahay jarista. Haddii aad doorato jarjar nadiif ah oo hilib cas, waxaad heli kartaa borotiinka aad raadineyso adigoon la socon dufan aad u badan.
Oo ka waran kalluunka? Kalluunka sidoo kale waa hilib wuxuuna siiyaa borotiin, sidaas darteed waa qayb muhiim ah oo qorshaha ka mid ah. Intaa waxaa dheer, kalluun badan ayaa dufan ku yar yahay, kuwa aan ahayn, sida salmon ama tuna, waxay sii wadaan xiisaha ay leeyihiin maadama ay ka kooban yihiin asiidh dufan omega 3. dufankaan caafimaadka qaba waxay waxtar u leeyihiin jirkaaga, oo ay ku jiraan wadnaha, sida sidoo kalluunku waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay cuntada borotiinka.
Aynu aragno dhammaan xulashooyinka kaa caawin kara inaad hesho borotiinkaas dheeriga ah Maxaa looga baahan yahay cuntada borotiinka:
Waxyaalaha caanaha ah
Ha dayicin fiberka
Laakiin ka taxaddar faybar la’aanta, taas oo, sidaad ogtahay, ay kuu sababi karto dhibaatooyin badan (oo ay ku jiraan calool fadhigu). Si loo xaliyo, waa inaad hubisaa in cuntadaada borotiinka ay ku jirto khudaar kugu filan, kaas oo ku siin doona fiber iyo walxo kale oo muhiim u ah shaqada jirka ee saxda ah. Taasi waa kiiska karbohaydraytyada.
Waad aqoonsan doontaa cunto borotiin tayo leh maxaa yeelay gabi ahaanba kama baxeyso nafaqadan. Badarka oo dhan had iyo jeer waa lagama maarmaan, laakiin si ka sii badan ayay ku jiraan cuntooyinkan. Maaddaama ay wax yar cunaan, waxaa muhiim ah inay wanaagsan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntada borotiinka